कपाल किन र्झछ ? यी हुन् ९ कारण - InHeadline
By Anu Rana on Feb 21,2019 - 16:35
कयै मानिस हरु कपाल झरेर हैरान भ्एका हुन्छ । भन्ने गर्छन कि कपाल झरेर हैरान भइयो के गर्ने ? हो यस्तो गुनासो फैलिदैदै गएको छ । कपाल झर्नु एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर, अस्वभाविक रुपले कपाल र्झछ भने त्यो चिन्ताको विषय पनि हो । कपाल झर्ने क्रम रोकिएन भने टाउको मुडुलो हुन्छ । यो भनेको समग्र सौन्दर्यकै लागि जटिल कुरा हो ।
कपाल किन र्झछ ? यसको एकमात्र जवाफ छैन । हालैको एक अनुसन्धानले भनेको छ की पुरुषमा आउने यस्ता समस्याको आम कारण अनुवांशिक हुने गर्छ । जवकी महिलामा स्त्रीमा भनेउ तनाव या मानशीक चिन्ताको कारण कपाल झर्ने गर्छ । यति मात्र होइन, कपाल झर्नेको थुप्रै कारण छन् । यी हुन् त्यसमध्येका प्रमुख कारणहरु यस प्रकारका छन ।
आजभोलि नुहाएपछि कपाल सुकाउनका लागि प्राय धेरै जसोले हेयर ड्राइअरको सहायता लिने गर्छन् । यो कपाल सुकाउन र हेयरस्टाइल बनाउनको लागि त तरिका हुन सक्छ । तर, कपालको स्वास्थ्यको लागि पनि त्यत्तिकै हानीकारक छ । अनुसन्धानले नै भनेको छ की कपाल बनाउनका लागि हरेक दिन यस्ता सामाग्रीको प्रयोग गर्दा कपाल विग्रीदै जान्छ । लगातार आफ्नो कपाललाई सिधा या घुम्रो बनाउने उपचार नै कपाल झर्नेको प्रमुख कारण बन्न सक्छ ।
ट्याग - कपाल किन र्झछ ? यी हुन् ९ कारण